A.K.N CONSTRUCTION GROUP: 2012
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:40 AM No comments:
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ ... လွယ်လည်း လွယ်ပါတယ်... ဒါ့အပြင်သိပြီးသားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...သိရင်တော့ မဖတ်ပါနဲ့တော့ အချိန်က တန်ဖိုးရှိပါတယ်... အခြား အဆင့်မြင့်ပိုင်းတွေကို ဆက်လက်လေ့လာ ဖို့အကြံပြုပါရစေ။
IP address ရဲ့ အရေးပါပုံကို အနည်းနဲ့ အများတော့ သိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်...။ ဒီ post မှာတော့ Gmail နဲ့ Yahoo Mail ထဲမှာ ကိုယ့်ကို Mail ပို့လိုက်တဲ့ သူရဲ့ IP address ကို ရှာဖွေတဲ့ နည်းလေးပါ။
GMail ထဲတွင် ပေးပို့သူရဲ့ IP address ကိုရှာဖွေခြင်း
၁။ log in လုပ်
၂။ Mail ဖွင့် ( ကိုယ်သိချင်တဲ့ Mail ကိုပြောတာပါ ။ )
၃။ header ရဲ့ ညာဘက်ထောင့် options ထဲမှာ ရှိတဲ့ Show Original ကို click လိုက် (အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံထဲက အတိုင်းပေါ့ )
၄။ အဲဒါကို click ပြီးသွားရင် new tab နဲ့ page တစ်ခုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲမှာ hostname တချို့ နဲ့အတူ [...] ထဲက နံပါတ်တွေကတော့ ဒီမေးလ်ကို ပေးပို့လိုက်တဲ့ သူရဲ့ IP ဖြစ်ပါတယ်...။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေအတိုင်းတွေ့ရနိုင်ပါတယ်...။
65.119.112.245 က ပေးပို့သူရဲ့ IP address ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့လိုက်တဲ့သူရဲ့ IP address Track ပါ။
Yahoo Mail ထဲမှ ပေးပို့သူရဲ့ IP address
၁။ log in
၂။ Mial ဖွင့်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီးရင် header ညာဘက်ထောင့်က Actions ထဲမှာ down arrow ကို click လိုက်၊ ပြီးရင် Full Header ကို click ပါ။ (ပုံမှာကြည့်ပါ။)
၄။ [ ] ထဲမှာ ပါတဲ့ နံပါတ်တွေကတော့ Sender ရဲ့ IP address ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Received: from 127.0.0.1 (EHLO account.m.imeem.com) (202.65.138.109)
202.65.138.109 ကတော့ IP address ၊ Track IP address ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:37 AM No comments:
အခြား အခြားသော forumတွေ၊ websiteတွေမှာ "Email ကို ကျနော်တို့ ဘယ်လို hack နိုင်သလဲ? ခင်ဗျားကျနော့်အတွက် hack ပေးနိုင်မလား ? ဆိုပြီး သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေ မေးနေကြတာကို သတိပြုမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် ဒီ post ဖြစ်လာရတာဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် hacking နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အခြေခံအတွေးအခေါ်လေးတွေကို ဖော်ပြထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုဆင့်ပွားပြီး အသုံးချရမယ်ဆိုတာကတော့ သင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးရပါလိမ့်မယ်။
Hack တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို Windows 98 ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပြီးကတည်းက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Hacking ဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ပျော့ကွက် ဟာကွက် ကွင်းဆက်တွေကို ရှာဖွေပြီး ၄င်းတို့ထဲကမှာ အချို့ယိုစိမ့်နိုင်တဲ့ holeတွေကနေ information တွေထွက်လာအောင် ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် အရေးပါနိုင်တဲ့ Passwordများ၊ Credit Card နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရယူချင် ရယူနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ကျနော် အကြံပေးချင်တာကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ Site တွေကနေ ဆောင်းပါးတွေ၊ ပို့ချချက်တွေကို သေချာဖတ်ရှုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်အတွက် Hacking ကို လေ့လာခြင်းမှာ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေ ကိုပဲ ဖော်ပြပြီး hacking နည်းလမ်း အချို့ ကို အကျဉ်းချုပ် ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hacking မှာ အခြေခံအားဖြင့် အဓိကကျတဲ့ အပိုင်း နှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ကွဲထွက်နေပါတယ်။ အဲဒါကတော့...
ယနေ့အချိန်ကာလများမှာ အများဆုံးအသုံးပြုနေကျဖြစ်တဲ့ ၊ Email, Passwords, Credit Card details စတဲ့ user information များကို hack တဲ့အခါ ကျော်ကြားနေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်...
Phishing ဆိုတာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ထူးခြားတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ hacker တွေက အချို့ website (သို့) gmail နဲ့ လုံးဝနီးပါးဆင်တူတဲ့ page တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ page တွေကို hacker တွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် server တွေမှာ upload လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် user အသစ်တွေဆီကို အဲဒီ link တွေပေးပို့ပါတယ်။ user တွေက အဲဒီ link ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါ user တွေ အနေနဲ့ သူတို့ ရောက်ချင်တဲ့ website (သို့) gmail လို့ထင်ပြီး သူတို့ရဲ့ username နဲ့ password တွေကို ရိုက်ထည့်ပြီး sign in (သို့) submit ကို click လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီ user ရဲ့ information တွေကို hacker ကရရှိသွားပါပြီ။ ဒီနည်းလမ်းကို hacking လောကထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ လူသစ်တွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို Simple Hacking ( Fake Login ပြုလုပ်ခြင်း) ဆိုတဲ့ post မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး အိန္ဒိယမှာ ရှိတဲ့ ICICI bank နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာဓက တစ်ခုရှိပါတယ်။ များစွာသော user info တွေကို ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး အခိုးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လူတော်တော်များများက ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းမှာ အားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ် အဲဒါကတော့ သားကောင်ဟာ internet နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတ အနည်းငယ်ရှိရုံနဲ့ ဒီ page ဟာ အစစ်မဟုတ်မှန်းသိနိုင်ပါတယ်... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက URL ကို ဖတ်ကြည့်မယ် ဒါဆိုရင် မူရင်း website မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်သွားနိုင်ပါတယ်။
Brute Forcer ဆိုတာကတော့ အခြေခံအားဖြင့် cracker လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Brute Forcer ထဲမှာသင်က သင် hack ချင်တဲ့ username ကို ထည့်သွင်းရပါမယ်...ပြီးတော့ notepad file တစ်ခုကိုလည်း password တစ်ခုကဲ့သို့ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ notepad ထဲမှာ ရှိသမျှ အားလုံးနီးပါး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာလုံးတွေ ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတော့ password မှာပါတဲ့ စာလုံးတစ်လုံးစီတိုင်းအတွက် notepad file ထဲမှာ ရှိသမျှ စာလုံးတိုင်းနဲ့ တိုက်ကြည့်ပါတယ်။ အားလုံးတူညီသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ပွဲသိမ်းပဲပေါ့...။ တခြား forum တွေမှာ " huge pass list" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို သတိပြုမိချင်ပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ၄င်းတို့က ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး...ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ bruteforcer ထဲကို ထည့်သွင်းဖို့ password list ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တခါတရံမှာ brute forcing ဟာ အချိန်အလွန်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
၃။ ယနေ့အချိန်ကာလမှာဆိုရင် လူတော်တော်များများဟာ alpha-numeric-symbol password တွေရှိနေကြပါပြီ။ bruteforcer အတွက် ၄င်းတို့က detect လုပ်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။
၄။ ကျော်ကြားတဲ့ gmail ကဲ့သို့သော site တွေမှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကတော့ loginုလုပ်တဲ့အခါ ၃ ခါထက်ကျော်ပြီး မှားယွင်းနေပြီးဆိုရင် ၄င်းတို့ က "image captcha" ကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက် bruteforcer ကို ရပ်သွားစေပါတယ်။
Keylogger ကတော့ "server" လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ file သေးသေးလေးတွေကို ဖန်တီးဖို့အတွက် သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်က သင့်ရဲ့ server ကို သားကောင် ဆီသို့ ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ သားကောင်က အဲဒီအပေါ်မှာ click လိုက်ရင်တော့ ကိစ္စပြီး ပါပြီ။
ဒီနည်းလမ်းဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို hack ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Keylogger ဆိုတာကတော့ သင့်သားကောင်ရဲ့ computer ထဲမှာ သူဟာသူ install လုပ်နိုင်တဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်သားကောင်က သူ့ရဲ့ keyboard ပေါ်မှာ ရိုက်လိုက်သမျှ keystrokeတိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ပြီးရင် ၄င်းက မှတ်တမ်းတင်လို့ ရသမျှတွေကို hacker ဆီသို့ပေးပို့ပါတယ်။ keystroke ( ဆိုလိုတာက FTP, Email , Messengers ) ကို လက်ခံရရှိဖို့ အများကြီးလမ်းရှိပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ပြောရရင် ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်ရဲ့ သားကောင်ကို လှည့်စားပြီး သူတို့ရဲ့ information တွေကို ရယူဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ( Keylogger Collection )
၁။ သင့်ရဲ့ သားကောင်က keylogger ကိုလက်ခံရရှိတဲ့ အခါ သူတို့ရဲ့ antivirus တွေက keylogger ကို အလိုအလျှောက် delete လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ လှည့်ဖြားခြင်းအားဖြင့် antivirus ကို disable လုပ်ဖို့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုချက် - ကျနော်အကြံပေးလိုတာကတော့ "crypters" လို့ခေါ်တဲ့ program တွေကို အသုံးပြုဖို့ပါပဲ။ ၄င်းတို့က သင့်ရဲ့ server တွေကို ရှာဖွေမတွေ့ပဲ ပြုလုပ်နိုင်စေဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်သားကောင်ရဲ့ anti-virus တွေက ၄င်းတို့ကို detect မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ Anti-Virus နဲ့ တူတူပုန်းတမ်းကစားကြမယ် ဆိုတဲ့ post မှာ Crypter တွေကို တင်ပေးထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Trojan တွေကတော့ keyloggerတွေရဲ့ ဖခင် နဲ့တူပါတယ်။ Trojan တွေက အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ keylogger တွေအတိုင်းပဲ သင့်ဆီကို keylog တွေ ပေးပို့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၄င်းတို့က သင့်သားကောင်းရဲ့ computer ကို သင် ထိန်းချုပ်မှု ရစေပါတယ်။ သင့်သားကောင်ရဲ့ computer မှာ သင့်စိတ်ကြိုက် fileတွေကို Edit / delete/ upload/ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Trojan တွေမှာ keyboard ကို ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်အောင် ( keyboard မှာ ကိုယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ စာလုံးက တစ်ခု ပေါ်နေတာက တစ်ခု ပေါ်ချင်တဲ့ စာလုံးလျှောက်ပေါ်နေတာ၊ တခါတလေ keys တွေကို ရိုက်လို့ရတဲ့ အခါ ရတယ် မရတဲ့ အခါလည်း မရဘူး အဲလိုမျိုးတွေပေါ့ )၊ CD ROM တွေ Eject လုပ်တဲ့ အခါ ထွက်မလာတာ ၊ CD ပြန်ထည့်ပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုတာ စသဖြင့် အခြား အခြားသော feature တွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ( Trojan Toolများ )
ကျနော်က ဘယ် website မဆို hack ဖို့အတွက် hacker တွေကို အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ အသုံးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ web hacking နည်းပညာ အချို့ ကို ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ တဘက်ကကြည့်ရင်လည်း ဒါဟာ သင် site ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကူညီပါလိမ့်မယ်။
( င ) နောက်ထပ်အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာတော့ အသုံးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်တာကိုပဲ ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်အခါမှာ website အများစုဟာ SQL Database တစ်ခုနဲ့ connect လုပ်ထားကြပါတယ်။ SQL Databaseက သူတို့ရဲ့ website သို့ လာရောက်လာပတ်သူက register လုပ်သွားတဲ့အခါ username နဲ့ password တွေ ( encrypt လုပ်ပြီး )ကို သိမ်းဆည်းထားဖို့အတွက် သူတို့ကို ကူညီပါတယ်။ SQL database က user တစ်ယောက် logs in လုပ်တဲ့ အခါတိုင်းမှာ မေးခွန်းတွေမေးမြန်းတဲ့ အလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ database ဆီသွားပြီး မှန်ကန်သေချာတဲ့ password ဟုတ်မဟုတ် ကြည့်ပါတယ်။ အကယ်၍ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ user ကို log in လိုက်ပါတယ်၊ မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ error တစ်ခုကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အခြေခံဆောင်ရွက်ချက်ကတော့ database မှာရှိတဲ့ internet information ကို အသုံးချဖို့ကြိုးစားပြီး database ထဲမှာရှိတဲ့ database ထဲမှာ မေးခွန်းတစ်ခုကို စစ်ဆေးဖို့ command တစ်ခုကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီ post ထဲမှာ ထည့်သွင့်ဖို့ဆိုတာ တကယ့်ကို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနည်းလမ်းဟာ website ကို hack ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေထဲမှာ အရှုပ်ထွေး အခက်ခဲဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်လို့ပါ။
သင့်ရဲ့ website မှာ RFI attach လုပ်ဖို့ အားနည်းချက်ရှိလား မရှိလားဆိုတာကို သိချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါ...
အကယ်၍ သင့် site ရဲ့ URL က....
ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ၄င်းရဲ့ အဆုံးမှာ ( ' ) ကို အောက်မှာ ပြထားသလိုမျိုး ပေါင်းထည့်ပေးပါ...
XSS ကတော့ အချို့ website တွေကို hack ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အချို့ website/ forum တွေက post ( သို့ ) ဆောင်းပါး တွေထဲမှာ HTML ခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် hacker က content ထဲကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ script တွေကို post လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်အချိန်မဆို user တစ်ယောက်က page ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်း cookieတွေက hacker ဆီကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် သူက user ကဲ့သို့ log in လုပ်နိုင်ပြီး website ကို #$%@# လုပ်ပါတော့တယ်။
Shell ဆိုတာကတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ .php script ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတော့ avaters, recepie, tricks , feedbacks ကဲ့သို့သော ဘယ်ဖိုင်မဆို upload လုပ်နိုင်တဲ့ website တစ်ခုခုမှာ နေရာ တစ်ခု ရှာပါ။ ပြီးရင် သင့်ရဲ့ shell file ကို အဲဒီထဲကို upload လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ upload ပြီးသွားရင် ၄င်းကို URL bar မှာဖွင့်ပါ။ အဲဒီ webhosting ရဲ့ FTP account တစ်ခုလုံးကို သင် မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ index page ထဲမှာပါဝင်သမျှကို သင့်စိတ်ကြိုက် rename/Edit/upload/download ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါပြီ။ အခုလိုပြုလုပ်ခြင်းကို deface လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
RFI ကလည်း website တစ်ခုကို deface လုပ်ဖို့အတွက် ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကို shell နဲ့အတူအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကို သင့်ရဲ့ shell ပေါ်မှာ upload လုပ်ပြီးပြီး ဆိုရင် သင့်ကိုအထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်...
ဒီဟာက သင့်ကို သင့်သားကောင်ရဲ့ sites FTP ၀င်လမ်း ကို ထပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ shell မှာလိုပဲ သင်ကြိုက်သလို သင့်စိတ်ကြိုက် လုပ်လို့ရပါပြီ။
အကယ်၍ သင်က သင့် website က RFI attach လုပ်ဖို့ အားနည်းချက် ရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတာကို စစ်ဆေးချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ပါ...
အကယ်၍ သင့် site ရဲ့ URL က
ဖြစ်နေခဲ့ရင် ၄င်းရဲ့ အဆုံးမှာ အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ပေါင်းထည့်ပေးပါ...
အကယ်၍ သင့် page ထဲမှာ google page ပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအဓိပ္ပာယ်က RFI သို့ တွဲဆက်ခြင်းမှာ ပျော့ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:32 AM2comments:
သင် IP address ( Internet Protocol ) ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ host name တွေကို သင် ခွဲခြားနိုင်ရပါမယ်။ IP addressများကို အမျိုးမျိုးခြားနားတဲ့ နံပါတ်တွေနဲ့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ IP address ဟာ အောက်မှဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်...
အများအားဖြင့် computer တစ်လုံးဟာ cable connection တစ်ခုပေါ်မှာ runနေတာလား ဆိုတာကို IP address ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီ မြန်ဆန်လှတဲ့ connection တွေဟာ အများအားဖြင့် ပထမဆုံး ကိန်းဂဏန်း နှစ်လုံးဟာ နိမ့်ကြပါတယ်။ cable connection တစ်ခုရဲ့ IP ကတော့ အောက်ပါပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်...
dialup connectionတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ကိန်းဂဏန်း မြင့်မားကြပါတယ်...
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:24 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:22 AM No comments:
ံHacking ကို လေ့လာသူများအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..စာအုပ်ပုံလေးတွေကိုသာ Click ပြီး download လုပ်လိုက်ကြပါ...။
Posted by Starry Prince comments (0)
(Educational Purposes Only) @ကျွန်တော်မှတ်စုစာအုပ်
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 3:56 AM No comments:
GoogleHacks 1.5 & 1.6 Full
Google မှာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ Audio ,Video, Text စသဖြင့် file typeများအားလုံးကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ပရိယာယ်အမျိုးမျိုး လှည့်ကွက်အမျိုးမျိုးသုံးနေကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခက်ခဲ့တဲ့လှည့်စားမှုတွေကို အဆုံးသတ်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူချောချောမွေ့မွေ့ နဲ့ ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ application ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Google Hacks ကတော့ music,books,videos,registry keys,tools,hacks နဲ့ proxy များကို Google ပေါ်မှာ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် စီမံပြုလုပ်ထားတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ utility တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Google Hacksဟာ internet ပေါ်မှာ သင်လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ file type များအားလုံးကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ဖို့ google အတွက် အထူးစီမံထားတဲ့ graphical toll တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Google Hacksက allinanchor:,allintext:,allintitle:,allinurl:,break:,it defines:,filetype:,you go:,inanchor:,info:,intext:,intitle:,inurl:,Phonebook:,related:,rphonebook:,site:,ကျနော်တို့ နောက်ထပ်ပြန်သွားဖို့ သတိရနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ stockများ စသကဲ့သို့သော အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် စီစစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၄င်းက သင်လိုချင်တာတွေဟာ Googleထဲမှာထိန်းသိမ်းထားတာတွေလောက်နဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင် Google Hacks က သင် ၄င်းရဲ့ extremely easy form ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Google Hacks 1.6 FULL
သင်ဟာ ဒီ program ကို Google ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် proxy တစ်ခုကဲ့သို့လည်းပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မူရင်း။ ။ ကျနော့မှတ်စုစာအုပ်
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 3:53 AM No comments:
Password တွေကို hack ချင်သူများအတွက် အနည်းနဲ့ အများတော့ အသုံးဝင်ပါတယ်... ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ softwareများ ရဲ့ Featureတွေကို rar ထဲမှာရှိတဲ့ read me file ထဲမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အထဲမှာ Serial key လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Netscape password hacker
mozilla firefox password hacker
e-m ail id collector
e-mail id password hacker 2.5 V yahoo gmail rediff and hotmail only
Password ******* :
e-mail password hacker,
network password revealers full versions
password remember for netscape revealer !
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 3:51 AM No comments:
The Guide to Basic HTML
ဒီတစ်ခါတော့ ဘလော့ဂါများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး basic html လမ်းညွှန်ချက်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြေခံအဆင့်ဖြစ်သည့် အတွက် စပြီးလေ့လာသူများအတွက်တော့ အဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်။ မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့အတွက် ပိုပြီး နားလည်ရှင်းလင်းမှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံဆိုသည့်အတိုင်း အခြေခံ သဘောတရားများသာ ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ရော.. နမူနာ ရေးထားတဲ့ sample html တွေရော ပါတဲ့အတွက် လေ့လာနိုင်အောင် မျှဝေပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် ဒေါင်းလုပ်လင့် နှစ်ခု ကနေ တင်ပေးထားတဲ့အတွက် အဆင်ပြေရာကသာ ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 3:41 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 3:40 AM No comments:
Microsoft Office 2010 [ Full ]
အားလုံးမျှော်နေကြတဲ့ Office 2010 ပါ ။ Upload ပြီးတာကြာပါပြီ ပိုစ့်တင်ချိန်မရလို့သာ မတင်ဖြစ်တာပါ ။ ပထမဦးဆုံး ဖိုင်အားလုံးကိုဒေါင်းပါ ၊ ဒေါင်းဖို့က မြန်တဲ့ Downloader တွေကိုသုံးပါ ။ ဖိုင်အားလုံးကိုဒေါင်းပြီးရင်အင်စတော လုပ်ပြီးကွန်ပြူတာကို Restart လုပ်လိုက်ပါ ။ ပြီးပြီဆိုလျှင် Activator ကိုသုံးလိုက်ပါ ။ Activatorသုံးနည်းကိုတော့ ဒီပိုစ့် မှာရှင်းထားပြီးသားပါ ။ Activator လေးပါထည့်ပေးထားတယ် ၊ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ဖိုင်အားလုံးကို Mediafire မှာပဲတင်ပေးထားပါတယ် ။ အဆင်ပြေကြစေဗျာ ။
Each File Size : 100 MB
Download Part : | Part 1 | Part2| Part3| Part4| Part5| Part6| Part7|
မူရင်း။ ။ ကိုကြီးလေး
ဒါတွေကတော့ Office 2010 ရဲ့ Key တွေပါ..လိုရမယ်ရပေါ့..။
Office 2010 Activation လေးပါ...။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 3:35 AM No comments: